साथीहरूसँग साथीहरू - शब्द फाउन्डेशन
"साथीहरूसँग पलहरू" एउटा प्रश्न र एक विशेषता हो शब्द पत्रिका। 1906 र 1916 को बीच, तल सूचीबद्ध प्रश्नहरू पाठकहरू द्वारा प्रस्तुत गरिएका थिए शब्द र श्री Percival द्वारा अपिल "ए मित्र" अन्तर्गत जवाफ। समय बित्दै जाँदा, हामीले उत्तरहरूको लेखकको रूपमा उसको नाम राख्ने निर्णय गरेका छौं। ऐतिहासिक प्रामाणिकता जोगाउन कुनै पनि टाइपोग्राफिकल त्रुटिहरू त्यस समयमा लोकप्रिय विराम चिह्न प्रयोगको साथ कायम राखिएको छ।
१ 1986 XNUMX मा, वर्ड फाउन्डेशनले वर्ड पत्रिकाको त्रैमासिक संस्करण सिर्जना गर्‍यो जुन अझै प्रकाशितमा छ। यसले "मित्रहरूसँग पलहरू" सेक्सन पनि समावेश गर्दछ जुन हाम्रा पाठकहरूले सोधेका प्रश्नहरू समावेश गर्दछ।
तलको मासिक मितिहरूमा क्लिक गर्नुहोस् कि मिति तल सूचीकृत सबै प्रश्नहरूको उत्तरहरू पहुँच गर्न।
यस प्रश्नको उत्तरमा जान प्रश्न मा क्लिक गर्नुहोस्।
थिच्नुस पीडीएफ मूल ढाँचा को प्रतिकृति को लागी।
• हामी कसरी हाम्रो अन्तिम अवतारमा भएको छ भनेर भन्न सक्छौं?
• हामी बताउन सक्छौं कि हामी पहिले जन्मेको कति पटक?
• के हामी हाम्रो पुनर्जन्म को बीच सजग हो?
• आदम र हव्वाको पुनर्मिलन को उपसामान्य विचार के हो?
• Reincarnations को बीच नियुक्त गरिएको समय को लम्बाइ के हो, यदि कुनै निर्दिष्ट समय छ भने?
• हामी पृथ्वीमा फर्किने बेला हामी हाम्रो व्यक्तित्व परिवर्तन गर्छौं?
• के एक सिद्धान्तमा अन्धकारमा विश्वास छ?
• अन्धविश्वासको आधार के हो जुन एक "caul" को साथ जन्मेको केही मानसिक संकाय वा तन्त्रमन्त्र अधिकार गर्न सक्छ?
• यदि एक विचार अर्कोको मनमा हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ, किन यो सही रूपमा र के रूप मा धेरै खुफिया संग साधारण कुराकानी गरिन्छ?
• के हामी केहि विचार सोचेको ट्रान्जिट प्रक्रियाको अनुरूप छ?
• हामी कसरी बुद्धिमानीसाथ कुराकानी गर्न सक्छौं?
• के अरूको विचारहरू पढ्ने अधिकार छ कि उनीहरूलाई हामीले गर्नु पर्छ वा होइन?
• यो किन राम्रो छ कि शरीरलाई मृत्यु पछि क्रिम राख्नुको सट्टामा क्रिम हुन्छ?
• के हामी पढ्न वा सुनेका कथाहरूमा कुनै सत्य छ, पिशाच र पिशाचको विषयमा?
• जवान वा जीवनको प्रजातन्त्रमा के व्यक्तिको अचानक मृत्युको कारण के हो भने, कहिलेकाहीँ उपयोगिता र वृद्धि को धेरै वर्ष, मानसिक र शारीरिक, ती अगाडि छन्?
• यदि खगोल आर्म, टाँग वा शरीरका अन्य सदस्यले शारीरिक सदस्यलाई टुक्रा बनाइदिएको छैन भने खैरो शरीरले अर्को भौतिक हात वा खुट्टा पुनरुत्थान गर्न सक्दैन किन?
• के थिस्सिएस्ट शाकाहारी वा एक मासु खानेकुरा हो?
• एक वास्तविक धर्मशास्त्रीले आफैलाई एक धर्मशास्त्र कसरी मान्न सक्छ र अझै मासु खाएमा हामी जान्दछौं कि जनावरको इच्छा जनावरको माछाबाट शरीरको शरीरमा हस्तान्तरण गरिएको छ जसले यसलाई खान्छ?
• के यो सत्य होइन कि भारतको योगहरू र ईश्वरीय प्राप्तिहरूका पुरुषहरू सब्जीमा बस्छन्, र यदि हां, त्यसो गर्नु हुँदैन जसले आफैलाई मासुबाट बच्न र सब्जिहरु पनि बाँच्न सक्छ?
• मासुको खानाको तुलनामा सब्जका खानेकुराले मानिसको शरीरमा कस्तो प्रभाव पार्छ?
• शाकाहारीवाद कसरी मनको एकाग्रता रोक्न सक्छ जब एकाग्रता प्राप्त गर्न शाकाहारीवादलाई सल्लाह दिइएको छ?
• शब्द तत्वहरूको सही अर्थ के हो, जो सिद्धान्त र विद्वानहरु द्वारा धेरै कनेक्शन मा प्रयोग गरिन्छ?
• "मानव मौलिक" को अर्थ के हो? के यो र निचो दिमागमा कुनै फरक छ?
• त्यहाँ एक मौलिक नियंत्रण इच्छाहरू, अत्यावश्यक शक्तिहरू नियन्त्रण गर्ने, अन्य शारीरिक क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्ने, वा मानव मौलिक नियन्त्रणले यी सबै नियन्त्रण गर्दछ?
• के हो चेतना कार्य र शरीर को बेहोश प्रकार्य दुवै नै समान नियंत्रण?
• सामान्य विकसित संस्थाहरूमा सामान्य तत्वहरू छन्, र तिनीहरू सबैजना वा विकासको क्रममा पुरुषहरू बन्नेछन्?
• भविष्यमा हेर्न को लागी यो साँच्चै सम्भव छ?
• के यो अतीत र घटनाहरूको वास्तविक घटनाहरू हेर्नको लागी सम्भव छैन जस्तो कि तिनीहरू भविष्यमा स्पष्ट र स्पष्ट रूपमा जस्तो हुनेछ जस्तो कि त्यो वर्तमान देख्नुहुन्छ?
• कहिलेकाहीँ हामी हाम्रो सबै अनुभवको विरोध गर्दा क्लैयरवुअरीजस्तै हेर्न कसरी सम्भव छ?
• Clairvoyance मा प्रयोग गरिएका अङ्गहरू के हुन्, र कसरी एक वस्तुको दृष्टिबाट नजिकबाट वस्तुहरू भन्दा ठूलो दूरीमा पठाइन्छ, र ज्ञात ज्ञात अज्ञात देखिने देखिन्छ?
• भविष्यमा एक आविष्कारवादी भविष्यलाई जब पनि उसले चाहानु सक्छ, र के गर्न सक्दछ यो एक क्लोयरभेट्ट फ्याट्याकले यसलाई गर्ने?
• यदि एक आविष्कारकले पर्दा घटाउन सक्छ भने किन चर्चितहरू होइन, व्यक्तिगत वा सामूहिक रूपमा आउँदै आएका घटनाहरूको ज्ञानबाट लाभ उठाउँछन्?
• "तेस्रो आँखा" के हो र clairvoyant र occultist यो प्रयोग गर्दछ?
• कोइराला ग्राउन्ड कसले प्रयोग गर्दछ, र यसको प्रयोगको वस्तु के हो?
• तेस्रो आँखा वा पाइनल ग्रंथि कसरी खुल्छ, र त्यस्तो उद्घाटनमा के हुन्छ?
• के क्रिसमस एक धर्मशास्त्रको लागि कुनै विशेष अर्थ छ, र यदि त्यस्ता कुरा हो?
• के यो सम्भव छ कि येशू एक वास्तविक व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो, र त्यो क्रिसमस डे मा जन्मिएको थियो?
• यदि येशू एक वास्तविक मानिस हुनुहुन्छ भने किन कि हामीले बाइबिल बयान भन्दा धेरै मानिसको जन्म र जीवनको कुनै ऐतिहासिक रेकर्डहरू छैनौ?
• तिनीहरू किन यो कल गर्छन्, डिसेम्बरको 25th, Jesusmass वा येशूको दिनको सट्टा क्रिसमसको, वा कुनै अन्य नामले?
• के येशू र जन्मको जीवनलाई बुझ्न को स्वभाविक तरिका छ?
• तपाईंले ख्रीष्टको एक सिद्धान्तको रूपमा बोल्नुभयो। के तपाईं येशू र ख्रीष्टबीच भेदभाव गर्नुहुन्छ?
• डिसेम्बरको 25th दिवस मनाउनको लागि त्यहाँ कुन विशेष कारण येशूको जन्म भएको जस्तो छ?
• यदि मानवलाई ख्रीष्ट बनेको सम्भव छ भने यो कसरी पूरा हुन्छ र यो डिसेम्बरको 25th दिनसँग कसरी छ?
• के यो शारीरिक बिरुवाहरूको उपचार गर्न शारीरिक साटो मानसिकता प्रयोग गर्न गलत छ?
• के यो मानसिक उपचार गरेर भौतिक रोगहरूको उपचार गर्ने प्रयास गर्ने हो?
• यदि यो मानसिक माध्यमबाट शारीरिक रोगहरूको उपचार गर्ने अधिकार हो भने, शारीरिक मुर्दाहरूले मानसिक उत्पत्ति प्रदान गर्दछन्, मानसिक वा क्रिश्चियन वैज्ञानिकको लागि यो गलत किन मानसिक उपचारले ती रोगहरूको उपचार गर्न सक्छ?
• मानसिक वैज्ञानिकहरूले शारीरिक या मानसिक विलक्षणको उपचारको लागि पैसा प्राप्त गर्न किन गलत छ र चिकित्सकहरूले नियमित रूपमा शुल्क तिर्छन्?
• किन यो मानसिक वैज्ञानिकको लागि सही छैन किनकि रोगको उपचारको लागी पैसा प्राप्त गर्न जब यो आफ्नो कामको सबै समय समर्पित हुन्छ र पैसा बाँच्नु पर्दछ?
• प्रकृतिलाई कसरी प्रदान गर्न सक्छ जसले साँच्चै अरूलाई फाइदा उठाउन चाहान्छ, तर आफैलाई समर्थन गर्न को कुनै अर्थ छैन?
• के क्रिश्चियन र मानसिक वैज्ञानिकहरूले राम्रो गरेनन् भने उनीहरूले उपचारलाई प्रभाव पार्छन् जहाँ चिकित्सकहरू असफल हुन्छन्?
• कुन मानदण्ड हामीसँग मानसिक आवश्यकताको लागी मानसिक वैज्ञानिक हुनुपर्छ?
• कुन तरिकामा आफ्नो आफ्नै वा अर्को मानसिक कार्यहरू पछ्याउने क्षमतामा, र मानसिक र क्रिश्चियन वैज्ञानिकहरूको दावीलाई बेवास्ता गर्ने कारणहरू साँच्चै देख्न सकिन्छ?
• क्रिश्चियन वा मानसिक वैज्ञानिकहरूको शिक्षाको स्वीकृति र अभ्यासको परिणाम के हो?
• किन यति धेरै मानसिक हर्बलहरू समृद्ध छन् भने उनीहरूको उपचारलाई प्रभाव पार्दैन भने, र यदि तिनीहरू आफैंले प्रतिनिधित्व गर्ने छैनन् भने उनीहरूले बिरामीलाई तथ्य पत्ता लगाउँदैनन्?
• के येशू र धेरै सन्तानहरूले मानसिक माध्यमबाट शारीरिक रोगहरूको उपचार गरेनन् र यदि यो गलत थियो?
• यदि मानसिक प्रक्रियाहरु द्वारा शारीरिक मुर्गाहरु को उपचार को लागि यो रकम गलत छ, या "विज्ञान शिक्षा" को लागि, यो एक शिक्षक शिक्षक को शिक्षा को कुनै शाखा मा छात्रहरुलाई निर्देशन को लागि पैसा प्राप्त गर्न पनि गलत छैन?
• (सम्पादकलाई एक पत्रमा, मार्च 1907 "क्षणहरूसँग मित्रहरू" critiqued, पछि श्री Percival.-एड बाट प्रतिक्रिया।)
• ईसाई भन्छिन् कि मानिसको शरीर, आत्मा र आत्मा छ। Theosophists भन्छन् कि मानिससँग सात सिद्धान्तहरू छन्। केही शब्दहरू यी सात सिद्धान्तहरू के हुन्?
• केही शब्दहरूमा तपाईं मलाई के भन्नुहुन्छ कि मृत्युमा के हुन्छ?
• प्रायः आध्यात्मिक व्यक्तिहरूले दावा गर्छन् कि उनीहरूको सागरमा दौडने आत्माहरू देखा पर्छन् र साथीहरूसित कुराकानी गर्छन्। Theosophists भन्छन् कि यो मामला होइन; त्यो के देखेको छ आत्मा, तर खोल, स्पच वा इच्छा शरीर जुन आत्मालाई खारेज गरिएको छैन। कसलाई सही छ?
• यदि मानिसको प्राणले आफ्नो चाहना शरीरद्वारा मृत्यु पछि कैदी राख्न सक्छ भने यो आत्मा किनाराहरूमा देखा पर्दछ र किन गलत भन्न सकिन्छ भन्ने कुरा गलत छ र सिट्टरहरूसँग कुराकानी गर्न सक्दछ?
• यदि सागरहरूमा उपस्थिति केवल गोलाहरू, हल्लाहरू वा चाहना निकायहरू हुन्, जुन मानव आत्माले मृत्यु पछि त्यागिएको छ, किन उनीहरूले मात्र व्यक्तिलाई मात्र ज्ञात विषयमा सिट्टरहरूसँग कुराकानी गर्न सक्षम छन्, र किन के यो विषय फेरि र अधिक माथि ल्याइनेछ?
• तथ्यलाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन कि आत्माहरू कहिलेकाहिँ सत्य बताउँछ र सल्लाह दिन्छन् जुन पछि लागी सबै चिन्ताको फाइदा हुन्छ। ईश्वरवादी, वा आध्यात्मवादको विरुद्ध कुनै अन्य व्यक्तिले यी तथ्यहरूलाई कसरी इन्कार गर्न वा व्याख्या गर्न सक्छन्?
• यदि यो सत्य हो कि कुनै पनि तर गोले, मदिराहरू र संस्थाहरू म्यानमा देखिने छैनन्, उपसभापतिका शिक्षाहरू अनुसार, कुन ठाउँमा, दार्शनिक र प्रायः दार्शनिक प्रकृतिको जानकारी र शिक्षाहरू जुन केही माध्यमहरू निस्सन्देह रूपमा पाएका छन्?
• के मृतक एक निश्चित अन्त प्राप्त गर्न व्यक्तिगत वा सामूहिक काम गर्दछ?
• मरे कसरी खान्छ, यदि सबै? उनीहरूको जीवनले कस्तो असर पार्छ?
• के मृत लुगा लगाउने?
• के मरे घरहरुमा बस्छन?
• के मर्यो निद्रा
• के मरे परिवारमा समुदायमा बस्छ, र यदि त्यहाँ त्यहाँ एक सरकार हो?
• त्यहाँ मृतहरूले गरेको कामको लागि सजाय वा इनाम छ, या त जीवनमा वा मृत्यु पछि?
• के मृत प्राप्त ज्ञान छ?
• के मरेको थाहा छ यस संसारमा के छ?
• तपाईं कसरी घटनाहरु को वर्णन गर्छन कि मृत सपनाहरु या तो सपना मा, या जागने मान्छे को, र केहि व्यक्तियों को मृत्यु को घोषणा को छ, सामान्यतया परिवार को अन्य सदस्यहरु नजिकै थियो?
• के मरे पृथ्वीमा हुँदा के भयो उनीहरूको परिवारको सदस्यमा आकर्षित भए, र तिनीहरूले उनीहरूलाई हेर्छन्; उनीहरूको जवान छोराछोरीमाथि छुट्याइएको आमा भन्छन्?
• मरेको संसारमा उही सूर्य र चन्द्र र हाम्रो संसारमा ताराहरू छन्?
• के यो कुरा सम्भव छ कि मृतकहरू जीवनका ज्ञान बिना जीवनलाई असर गर्न, विचार वा कामहरू सुझाव गरेर?
• के कसैलाई थाहा छ कि केन्द्र किन हाम्रो आसपासको सूर्य र यसको ग्रहहरू विद्रोही जस्तो देखिन्छ? मैले पढेको छु कि यो अल्कोन वा सिरीस हुन सक्छ।
• कुन कुराले मानिसको हृदयलाई हराउँछ? के यो सूर्य बाट लहरहरु को कम्पन, साँस को बारे मा के छ?
• हृदय र यौन प्रकार्यहरू बीचको सम्बन्ध के हो - श्वास गर्ने पनि छ?
• चाँदीले मानिस र पृथ्वीमा अन्य जीवनसँग के गर्नु पर्छ?
• के सूर्य वा चाँद को विनियमित या कैथेमियल अवधि को नियंत्रित गर्दछ? यदि छैन भने के गर्छ?
• के तपाईं मलाई आगो वा ज्वाला को प्रकृति बारे केहि भन्न सक्नुहुन्छ? यो संधै सबैभन्दा रहस्यमय कुरा देखिन्छ। मैले वैज्ञानिक पुस्तकहरूबाट कुनै संतोषजनक जानकारी प्राप्त गर्न सक्दिनँ।
• महान conflagrations को कारण के हो, प्रशेरिइ आगो र आगो कि एक साथ वसन्त जस्तो एक शहर को विभिन्न भागहरु देखि देखिन्छ, र क्यामेरा दहन के हो?
• सुन, तांबे र चाँदीको रूपमा जस्ता जस्ता धातुहरू कसरी छन्?
• के तपाई ज्योतिष विज्ञानको रूपमा विश्वास गर्नुहुन्छ? यदि त्यसो भए, यो मानव जीवन र चासोको सम्बन्धमा कसरी विचार गर्न सकिन्छ?
• जन्म को क्षण शारीरिक संसार मा किन अवतार को लागि अहंकार को भाग्य को प्रभावित गर्दछ?
• जन्मको पल कसरी संसारको एक भाग्य निर्धारण गर्दछ?
• जन्म, वा एक भाग्य को प्रभाव कसरी अहंकार को कर्म संग सहयोग?
• के मानव कर्म को वा व्यवस्थापन गर्न को लागी ग्रहों को प्रभावहरु लाई कार्यरत छ? यदि त्यहि छ भने नि: शुल्क कहाँ आउनेछ?
• किन कहिलेकाहीं येशू मानिसजातिको स्वर्गीय मध्ये एक हुनुहुन्छ र ती पुरातनताका मानिसहरू पनि आफ्नो सवार थिए, बरु उहाँले सबै क्रिश्चेंडर द्वारा आयोजित संसारको मुक्तिदाता हुनुहुन्छ भनेर भन्नु भएको थियो?
• क्या तपाईं हामिलाई बताउनुहुन्छ कि यदि डिसेम्बर को बीस -वास्तव दिन वरिपरि वा वरदानको जन्म मनाउने कुनै व्यक्ति हो (सूर्यलाई साइन मक्रेटर्न प्रवेश गर्ने बेलामा?
• यो भनिएको छ कि ख्रीष्टको जन्म एक आध्यात्मिक जन्म हो। यदि यो हो भने, किन खानेकुरा र पिउने गरी शारीरिक शरीरको लागि क्रिसमस मनाइएको छ, भौतिक तवरमा, जो आध्यात्मिकताको हाम्रो धारणाको धेरै विपरीत हो?
• भोल्टेजको "साथीहरूसँग", "। 4, पृष्ठ 189, यो क्रिसमसको अर्थ छ "रोशनीको अदृश्य सूर्यको जन्म, ख्रीष्ट सिद्धान्त," जुन, यो जारी छ, "मानिसको भित्र जन्माउनु पर्छ।" यदि यो हो भने, यसले यसलाई पछ्याउँछ येशूको जन्म पनि डिसेम्बरको बीस-पाँचौं मा थियो?
• यदि येशू वा ख्रीष्टलाई बाँच्नुभएन र उहाँले गरेको मान्नुभन्दा सिकाउनुभयो भने, कसरी त्यस्ता त्रुटिहरू यति धेरै शताब्दीका लागि सफल हुन सक्छ र आज प्रबल हुनुपर्छ?
• के तपाईं भन्नु भएको छ कि ईसाई धर्मको इतिहास कुनै पनि योग्यता होइन, ख्रीष्टको जीवन एक मिथक हो, र यो लगभग 2,000 वर्षको लागि दुनिया एक मिथकमा विश्वास गरिरहेको छ?
• यदि खगोलविभाषी कुरा मार्फत हेर्न सक्षम छन् भने, किन किन यो कुनै न कुनै नियन्त्रण को माध्यम ले अब प्रसिद्ध नारंगी गिनती परीक्षण को पूरा गर्न मा सक्षम छ?
• यस व्याख्याले प्रायः धेरै भूकम्पहरूको लागि प्रस्ताव गर्छ, जुन प्रायः देखा पर्दछ, र जसले हजारौं मानिसहरूलाई नष्ट गर्न सक्छ?
• सर्वोच्चको ईश्वरीय अवतार वा अवतार के हो?
• पिट्यूटरी शरीरको प्रयोग वा प्रकार्य के हो?
• पीनियल ग्रंथिको प्रयोग वा प्रकार्य के हो?
• धुरीको प्रयोग वा प्रकार्य के हो?
• थाइरोइड ग्रंथिको प्रयोग वा प्रकार्य के हो?
• पशुहरू मनपर्छ र तिनीहरूले सोच्छन्?
• के कुनै पनि दुष्ट प्रभावलाई मानव जनावरहरूको उपस्थितिले मानव जातिलाई ल्याउनेछ?
• के उनीहरूको दावीको लागि कुनै आधार हो भनेर भन्न सकिन्छ कि आत्माहरूले मानिसहरूलाई चराहरू वा जनावरहरूमा घुमाउँदछ?
• सिंह, भालु, मयूर, रत्सलस्नेक जस्ता विभिन्न किसिमका जनावरहरू उत्पादन गर्न मानव संसारका विभिन्न किसिमका विचारहरूले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा अझ विस्तृत रूपमा वर्णन गर्न सक्नुहुन्छ? (यो प्रश्न पर्सीभलको सम्पादकीय हो सोचा-एड।)
• आफ्नो शरीर भित्र एक नजर हेर्न र विभिन्न अङ्गहरूको कार्य देख्न सक्छ, र यदि यो कसरी गर्न सकिन्छ?
• कुन महत्त्वपूर्ण बिन्दुमा खगोल संसारले आध्यात्मिक तवरमा फरक पार्छ? यी सर्तहरू प्रायः यी विषयहरूसँग सम्बन्धित किताबहरू र पत्रिकाहरूमा अन्तरनिर्मित रूपमा प्रयोग गरिन्छ, र यो प्रयोग पाठकको दिमागलाई भ्रमित गर्न उपयुक्त हुन्छ।
• के शरीरको प्रत्येक अंग बुद्धिमानी इकाई छ वा यसले यसको काम स्वचालित रूपमा गर्छ?
• यदि प्रत्येक अंग वा भौतिक निकायलाई दिमागमा प्रतिनिधित्व गरिएको छ भने, किन पागल व्यक्तिले आफ्नो दिमागको प्रयोग गर्दा आफ्नो शरीरको प्रयोग गुमाउँदैन किन?
• यो व्यावहारिक प्रतीत छैन कि दुई वा बढी विरोधाभासी विचारहरू कुनै सत्यको बारेमा सही हुन सक्छ। केही समस्याहरू वा चीजहरूको बारेमा किन धेरै विचारहरू छन्? त्यसोभए हामी कसरी बताउने कुन कुरा सही छ र सत्य के हो भन्न सक्नेछौं?
• वर्षका निश्चित महिनाहरूमा अनमोल ढुङ्गाहरू किन नियुक्त गरिएका छन्? के यो फैंसी भन्दा बढी केहि कारणले के हो?
• एक हीरा वा अन्य कीमती पत्थर छ कि पैसा को मानक द्वारा प्रतिनिधित्व को तुलना मा एक मूल्य छ? र, यदि त्यहि, एक हीरा वा अन्य यस्ता ढुङ्गाको मूल्यमा निर्भर गर्दछ?
• के आत्माले मानिससँग कार्य गर्दछ र आध्यात्मिक प्राणीहरू के हो?
• वहाँ एक विश्वास छैन कि एटलट्यान्टन्स उड्न सक्छन? यदि त्यसो भए, त्यस्तो विश्वास कहां छ?
• एयर विमान नेभिगेसन, पुनर्जन्म एटलटियन्सन्स को समस्या को हल गर्ने कोशिश गर्दै रहे हो?
• यदि अटलांटियनहरूले हवाई नेभिगेसनको समस्या हल गरेको थियो, र यदि ती समस्याहरूसँग अब सम्बन्धित एटिएटट्यान्ट थिए, त्यसोभए यी व्यक्तिहरूले अटलांटिस डूब्न र अहिलेको समय भन्दा पहिले पुनर्जन्म गरेनन र हालको समय भन्दा पहिले, र यदि तिनीहरू पहिले वर्तमान युग, किन तिनीहरू हवामा पराजित गर्न वा वर्तमान समय भन्दा उडान गर्न सक्षम भएनन?
• के हामी वा हामी अम्मामा बन्धनमा संघमा छौं?
• के यो सत्य होइन कि हामी सबै हुन सक्दछौं हामी पहिले नै छ र हामी सबै गर्न चाहन्छौं कि यो सजग हो कि?
• अन्धकार प्रकाशको अभाव छ, वा यो आफैमा केहि फरक छ र जो प्रकाशको ठाउँ लिन्छ? यदि तिनीहरू अलग र अलग छन् भने, अन्धकार के छ र प्रकाश कस्तो छ?
• रेडियम भनेको के हो र यसको लागी यसको लागी निरन्तर एक महान ऊर्जा फेंक गर्न को लागी कुनै स्पष्ट बर्बाद र यसको आफ्नै शक्ति र शरीर को हानिकारक छ, र यसको महान रेडियोकर्मिटी को स्रोत के हो?
• के यो सब्जी, फल वा बिरुवाको नयाँ प्रजाति विकास गर्न सम्भव छ कि कुनै अन्य ज्ञात प्रजातिहरूबाट पुरा तरिकाले फरक र फरक छ? यदि त्यसो भए, यो कसरी भयो?
• के यो सम्भव छ र भविष्यमा हेर्नको लागि सही छ र भविष्यका घटनाहरूको भविष्यवाणी गर्छ?
• के यो मनलाई मनबाट बाहिर राख्न सम्भव छ? यदि त्यसो भए, यो कसरी भयो? कसरी यो यसको पुनरावृत्ति को प्रचार गर्न र मन को बाहिर राखन सक्छ?
• के गोप्य समाजसँग सम्बन्धितले यसको विकासमा दिमागलाई अग्रसर गर्ने वा अगाडि बढाउने प्रभाव पार्दछ? केहि पनि केहि प्राप्त गर्न सम्भव छ?
• मानिसहरू किन केहि गर्न को लागी केहि गर्ने प्रयास गर्छन्? मानिसहरू कसरी केहि गर्न को लागि केहि प्राप्त गर्न प्रकट हुन्छन्, तिनीहरूले के प्राप्त गर्न को लागि तिर्नुपर्छ?
• धर्म र नयाँ विचार के बीच आवश्यक मतहरू के हो?
• क्यान्सरको कारण के हो? त्यहाँ यसको लागि कुनै ज्ञात उपचार छ वा उपचारको केही विधि पत्ता लगाउनु अघि यसको औषधि प्रभावकारी हुन सक्छ?
• किन साँप अलग फरक मान्छे द्वारा फरक फरक छ? कहिलेकाहीं एक सांपले दुष्टको प्रतिनिधिको रूपमा बोलेको छ, अन्य समयमा बुद्धिको प्रतीकको रूपमा। किन मान्छे को सांप को यस्तो निहित डर छ?
• के कथाहरूमा कुनै सच्चाइ छ कि रोजसिलीहरू कहिल्यै जलाउन थाल्छन्? यदि त्यसो भए, तिनीहरू कसरी बनाइए, तिनीहरूले कुन उद्देश्यले सेवा गरे, र तिनीहरू बनाइएका र अहिले प्रयोग गर्न सक्दछन्?
• ईगल किन विभिन्न राष्ट्रहरूको प्रतीकको रूपमा प्रयोग गरिन्छ?
• क्या डबल हेड ईगल अब केहि देशहरु को राष्ट्रीय प्रतीक को रूप मा प्रयोग गरिन्छ, र बाइबिलिक समय को पुरातन हितिट्स को स्मारकहरुमा भेटिन्छ, मानिस को आहिरो हालत को अनुकरण गर्दछ?
• चार चौथाई र रोयल आर्चोनको म्यासोनिक कीस्टोनमा सर्कलको आधा चौथाईमा अक्षरहरू HTWSSTKS के छन् तिनीहरू उनीहरूको राशिको कुनै सम्बन्ध छ र सर्कल वरिपरि उनीहरूको पदले के संकेत गर्दछ?
• खानेकुरामा के सिकिन्छ?
• खाना खाएर पोषणको रूपमा कुनै पनि खानेकुरामा स्वाद छ?
• कसरी आफूलाई आफूलाई अरूको झूटो वा शत्रुको विरुद्धमा जोगाउन सक्छ?
• हिब्रू जनावरहरू कसरी आफ्नो लामो समयको हाइबेरेशनको समयमा भोजन बिना र स्पष्ट रूपमा बाँचिरहेका छन्?
• के फेफड़ों संग एक जना सासु बिना साँस रहन सक्छ? यदि त्यसो भए, यो कसरी बाँच्दछ?
• के विज्ञानले कुनै पनि कानुनलाई मान्यता दिन्छ जुन मानिसले बिना खाना र हावामा बाँच्न सक्छ। यदि त्यसो भए, पुरुषहरू यति धेरै छन्, र व्यवस्था के हो?
• समय किन विभाजित छ यो?
• भौतिक शरीर वा मानव निकायमा अन्य प्रक्रियाहरूसँग साताका दिनमा विभाजनमा समय, महिना, हप्ता, दिन, घण्टा, घण्टा र सेकेण्डमा समय छ? यदि त्यसो भए, के के संवादहरू के हुन्?
• के एक मानिसले यसबाट जीवित जीवन बिताउन सक्छ, कार्यहरू पूरा गर्न सक्छ र एक वर्ष भन्दा बढी जीवनमा मर्छ?
• जादुई प्रक्रियाहरु द्वारा प्राथमिक मामला हुन सक्छ, हात मार्फत कंक्रीट फारममा ल्याइनेछ; यदि हो भने, कुन विशेष फारम उत्पादन गर्न सकिन्छ र यो कसरी गरिन्छ?
• आफ्नो आफ्नै शरीरको शरीर वा शरीरको कुनै भागमा ह्यान्ड्स कसरी प्रयोग गर्नुपर्छ?
• भक्तिमा वृद्धि को लागी आवश्यक छ?
• धूपको स्वभाव कस्तो छ, र यो कति लामो समयको प्रयोगमा छ?
• धूपको जलबाट व्युत्पन्न कुनै पनि फाइदाहरू छन्?
• कुनै पनि विमानहरूमा धूमिल जलिरहेको प्रभावको असर हो?
• सातवटा ग्रहहरूमा कुन रंगहरू, धातुहरू र ढुङ्गाहरू विशेषता गरिन्छ?
• केने पहने जन्मेको त्यो ग्रहको पक्ष द्वारा रंग, धातु र ढुङ्गाको पहचाई राख्नु पर्दछ?
• रंगहरू, धातुहरू र ढुङ्गाहरू कुनै विशेष गुणहरू छन्, र तिनीहरू कसरी ग्रहहरूसँग चिन्न गाह्रो हुन सक्छन्?
• कुन अक्षरहरू वा संख्याहरू जोडिएका वा ग्रहहरू हुन्?
• के मानिस macrocosm को माइक्रोकोस छ, सानो मा ब्रह्मांड? यदि त्यसो भए, ग्रहहरू र दृश्यात्मक ताराहरू उनको भित्र प्रतिनिधित्व गरिनुपर्दछ। तिनीहरू कहाँ छन्?
• सामान्यतया स्वास्थ्यले के हो? यदि यो मानिसको शारीरिक, मानसिक र आध्यात्मिक शक्तिको संतुलन हो, त्यसपछि सन्तुलन कसरी राखिएको छ?
• के यो सबै भन्दा राम्रो व्यक्ति एक व्यक्ति को लागि आफ्नो शरीर को शारीरिक रूप देखि छोडने को लागि, यो आत्मा आफ्नो सपना को राज्य मा प्रवेश गर्न सक्छन्?
• कुन उचाईले आत्मालाई पुग्छ जसले आफ्नो शारीरिक शरीर सजग भई छोड्छ र मृत्यु पछि होशियार रहन्छ?
• कृपया अनन्तताको परिभाषा दिनुहोस् र छोटो अवस्था कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ?
• के मानिस मनपर्ने र मननपर्नेहरू आफ्नै आत्माको प्रतिबिम्ब हुन्? यदि त्यसो भए, तिनीहरूले कसरी झल्काउँछ? यदि होइन भने, यी मनपर्ने र मननपर्नेहरू कहाँ आउँछन्?
• के यो राम्रो छ कि एक व्यक्तिले आफ्नो यौन इच्छाहरूलाई दबाब दिनुपर्छ, र उसले स्वर्गीय जीवन बिताउन कोसिस गर्नुपर्छ?
• प्रायश्चितको सिद्धान्त को तर्क के हो, र यो कसरी कर्मको संग मेलमिलाप हुन सक्छ?
• हँसिलो के हो र मान्छे किन हँसिन्छ?
• चुम्बनवाद र गुरुत्वाकर्षणको बीच सम्बन्ध के हो, र तिनीहरू कसरी भिन्न हुन्छन् भने, यदि सबैमा? र चुम्बनवाद र पशु चुम्बकत्व को बीच सम्बन्ध के छ, र उनि कसरी फरक छ, सबै मा?
• पशु चुम्बकत्वले कसरी उपचार गर्छ?
• पशु चुम्बकत्व, mesmerism, र सम्मोहनवाद सम्बन्धित छन्, र यदि हां, तिनीहरू तिनीहरू कसरी सम्बन्धित छन्?
• जनावर चुम्बकत्व कसरी सक्रिय हुन सक्छ, र के यो प्रयोग गर्न सकिन्छ?
• गन्धको अर्थ के हो? यो कसरी कार्य गर्दछ; शारीरिक कणहरू सनसनीको उत्पादनमा संलग्न हुन्छन्, र कुन भागमा जीवनमा बजाउने खेल खेल्छ?
• कल्पना के हो? यसलाई कसरी खेती गर्न सकिन्छ र प्रयोग गरिन्छ?
• रोग कस्तो छ र यसको साथमा कस्तो ब्याक्टेरिया छ?
• क्यान्सर भनेको के हो र यो उपचार गर्न सकिन्छ, र यदि यो ठीक हुन सक्छ, उपचार के हो?
• जागृत र सपना देख्ने राज्यलाई जोड्ने एक राम्रो तरिका के हो ताकि त्यसो गर्दा कुनै अन्तराल छैन जुन सुँगुर बेहोश छ?
• हाम्रो रायको लागि आक्रोशित गर्न हामीलाई के आग्रह गर्छ? कुन हदसम्म हामी अरूलाई हाम्रो रायको विरोध गर्न अनुमति दिन्छौं?
• यो कसरी हो कि समस्याहरु जो सबै प्रयासहरु चकित छ र समाधान को असंभव देखिन्छ लगन को समयमा घंटों को हल को हल गर्न को लागी या तुरुन्त जागने को लागी?
• मेमोरी के हो?
• मेमोरीको हानि कस्तो हुन्छ?
• कुन कारणले उसको आफ्नै नाम बिर्सन सक्छ वा त्यो कहाँ बस्छ, यद्यपि उनको मेमोरीले अन्य सन्दर्भमा बिग्रेको हुन सक्छ?
• सामान्यतया "आत्मा" शब्दको अर्थ के हो र आत्मा शब्द कसरी प्रयोग गर्नुपर्दछ?
• नरकमा दण्डको रूपमा हाम्रो पीडाको धर्मशास्त्रीय बयानको आधारमा, क्रर्मिक कारावासको रूपमा पृथ्वीमा हाम्रो पीडाको प्रसंगोपचारिक सिद्धान्त होइन, जुन दुवै पक्षले मात्र विश्वासमा स्वीकार गर्नुपर्छ; र, अर्को, एक नैतिक भलाइको उत्पादन गर्न अर्को को लागी राम्रो छ?
Word Foundation, Inc. | सोच र भाग्यका प्रकाशकहरू
भाषा चयन गर्नुहोस्AfrikaansAfsoomaaliAzərbaycan diliBahasa IndonesiaBahasa MelayuBasa JawaBasa SundaBosanskiCatalàCebuanoČeština‎ChichewaCorsuCymraegDanskDeutschEestiEnglishEspañolEsperantoEuskaraFilipinoFrançaisGaeligeGàidhligGalegoHarshen HausaHmongHrvatskiIgboisiXhosaÍslenskaItalianoKiswahiliKreyol ayisyenLatviešu valodaLietuvių kalbaMagyarMalagasyMalteseNederlandsNorsk bokmålŌlelo HawaiʻiO‘zbekchaPolskiPortuguêsRomânăSesothoShonaShqipSlovenčinaSlovenščinaSuomiSvenskaTe Reo MāoriTiếng ViệtTürkçeYorùbáZuluΕλληνικάБеларуская моваБългарскиҚазақ тіліКыргызчаМакедонски јазикМонголРусскийСрпски језикТоҷикӣУкраїнськаՀայերենქართულიአማርኛיידישעִבְרִיתاردوالعربيةسنڌيفارسیكوردی‎پښتوनेपालीमराठीहिन्दीবাংলাਪੰਜਾਬੀગુજરાતીதமிழ்తెలుగుಕನ್ನಡമലയാളംසිංහලไทยພາສາລາວဗမာစာ한국어ភាសាខ្មែរ日本語简体中文繁體中文